युभेन्टसमाथि रोनाल्डोसँग गोप्य सम्झौता गरेको आरोप !
२०७८ मङ्सिर १८ शनिबार
काठमाडौँ । युभेन्टसले क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग गोप्य रुपमा सम्झौता गरेको आरोप लागेको छ । युभेन्टसमाथि रोनाल्डोलाई रियल म्याड्रिडबाट भित्र्याउदा गरेको आर्थिक संम्झौता लुकाएको आरोप लागेको हो ।
इटालीको कन्जुमर वाचडगले यस विषयमा छनबिन थालेको छ । युभेन्टसले रोनाल्डोसँगको सम्झौता बारे गलत जानकारी दिएको र फाइनान्सियल फेयरप्लेको नियम तोडेको आरोप लागेको छ ।
छानबिनको क्रममा प्रहरीले युभेन्टसको टुरिन र मिलानका कार्यालयमा छापामारेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । प्रहरीले रोनाल्डोलाई भुक्तानी गरिएका र रोनाल्डोसँग सम्झौता गरिएका कागजपत्रको अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।
इटालियन अधिकारीहरुले रोनाल्डो म्यानचेस्टर युनाइटेड जानु अघि कोरोना महामारीको अवधिको प्रारिश्रमिक तोकिए भन्दा अन्यथा भुक्तानी गरिएको र अन्य कैयौं किसिमका भुक्तानी युभेन्टसले रोनाल्डोलाई गरेको आशंका गर्दै अनुसन्धान अगाडी बढाएका छन् ।
यस प्रकरणमा अहिले टोटनह्यामका प्रबन्ध निर्देशक रहेका फाबिओ पाराटीसीमाथि पनि छानबिन भइरहेको बताइएको छ । उनले रोनाल्डोले युभेन्टस छोडेसँगै क्लब छोडेका थिए ।
यस प्रकरणमा रोनाल्डो इटालियन अनुसन्धानकर्तालाई बयान दिन उपस्थित हुनसक्ने इटालियन मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
मिडिया रिपोर्ट अनुसार यस प्रकरणमा युभेन्टस दोषी ठहरिएमा सिरी ए बाट रिलिगेशनमा पर्नेसम्मको कारवाही हुनसक्ने बताइएको छ ।
मेसी बने विश्वकै धेरै कमाउने खेलाडी, रोनाल्डो तेस्रो स्थानमा
काठमाडौँ । लियोनेल मेसी सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने खेलाडी बनेका छन् । फोर्ब्सको पछिल्लो अपडेट अनुसार मेसीले लेब्रोन जेम्सलाई पछि पार्दै फोर्ब्सको सबैभन्दा धेरै कमाउने खेलाडीको सूचीमा पहिलो स्थानमा पुगेका
हालान्ड म्यानचेस्टर सिटी जाने पक्का !
काठमाडौँ । म्यानचेस्टर सिटीले बोरुसिया डर्टमण्डबाट एर्लिङ हालान्डलाई अनुबन्ध गर्ने तयारी गरेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार २१ वर्षीया नर्वेजियन स्ट्राइकर हालान्डलाई अनुबन्ध गर्ने दौडमा रियल म्याड्रिड र बायर्न म्युनिखभन्दा अगाडि
रोनाल्डोलाई फर्गुशनको सुझाव- लिगेसी बचाउन युनाइटेडमै बस्नु !
काठमाडौँ । म्यानचेस्टर युनाइटेडको यो सिजनमा खराब प्रदर्शन पछि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो भविष्य बारे छलफल थालेका छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार रोनाल्डोले युनाइटेडमा आफ्नो भविष्य बारे लिजेण्डरी प्रशिक्षक सर एलेक्स फर्गुसनसँग
रोनाल्डोको गोलमा चेल्सीसँग हारबाट जोगियो म्यानचेस्टर युनाइटेड
काठमाडौं । इग्लिस प्रीमियर लिग (ईपीएल) अन्तर्गत बिहिबार राति भएको खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र चेल्सीले १-१ अन्तरको बराबरी खेलेका छन् । युनाइटेड घरेलु मैदान ओल्डट्राफोर्डमा भएको खेलमा भ्रमणकारी टोली चेल्सीले सुरुआती